Inzuzo main esandleni ukunitha ukukhilosha amasu kungaba kubhekwe ithuba ukushintsha isiqondiso kunoma ubani. Lokhu lula kakhulu womshini izindwangu abobunjwa eziyinkimbinkimbi noma ukucupha. Yingakho amakhosi amaningi, amathoyizi ukunitha, futhi izingubo zezingane, uncamela ukusebenzisa amaphetheni, eyenzelwe ukukhilosha.
Izinzuzo ukunitha isiyingi
onobuhle Abaningi sigqoka futhi blouses, crocheted zihlanganisa isici kwesakhiwo lokuthi udlala ngothando. Ngakho ngokuthi engenhla ingxenye umkhiqizo lihlukile iphethini base kuwebhu noma umbala.
Ngokuvamile ngothando ukukhilosha wathungela round. Lona elula, ngoba ungasabalalisa intambo anemibala (uma ikhona imodeli), kanye ukugwema isidingo thunga izingxenye ngabanye.
Coquette kungaba wonke noma ukuhlukana. Samuntu yesibili esebenzayo uma uhlela sihloko obumbene nge ukuyona.
Obumbene round ijoka
buka Round abadlala ngothando ababona - edume kunazo futhi ethandwa, kuba collar ukushintshwa. Round ijoka hook kufanelekile ngokuvumelana scheme, njengoba ukuthola efanele ifomu izingxenye kufanele uhambisane nemigomo ukunwetshwa kuwebhu.
Ngo imithombo ehlukahlukene kulula kakhulu ukuthola amaphethini kwesokudla. Endabeni kakhulu kungenzeka ukuzivumelanisa iyiphi isiyingi wesifunda napkins noma isinqamu kwendwangu (sokukhipha ukunitha phakathi bese ukhetha umugqa wokuqala ngu ibanga mayelana 8-10 cm kusukela maphakathi).
Kukanxande ijoka Raglan
Ukwaluka ijoka unxande kuyahluka kakhulu ezingxenyeni isiyingi akhiqize. Ukuthola Ukwaluka usuqala - njengoba yaseZimbabwe uchungechunge, kodwa ukunwetshwa isimiso kuhluke ngokuphelele. Ukwengeza loop akuyona okuye kwasakazwa eminyakeni obuphelele wonke yochungechunge futhi kuqondise e amaphuzu amane. In ngamunye kubo ungeze izihibe amabili ngesikhathi provyazyvaniya uchungechunge ebusweni. Ngakho, zonke izinhlu ezimbili zamahalananda lendwangu kukhuphuke ngo izihibe eziyisishiyagalombili. Le ndlela isetshenziswa ukunweba ukunitha kamuva ebusweni quadrilateral ngamunye futhi wamukele izinto ngaphambi, imihlane nezingalo.
Sample (ijoka ukunitha ukukhilosha) kungabonakala izithombe ngezansi. Lapha-ke uboniswa njengendlela okuqhubekayo ijoka ukuluka, kodwa ngokulinganayo kungenzeka okwenza into, ngokusebenzisa iphethini nge transverse stripes.
Umkhiqizo osuphelile ijoka unxande sengathi zixhunywe indlela Raglan. Isici esibalulekile salo ijoka ukuthi uvumela ukuxhuma emikhonweni, ngokuba engela esingaphansi ngo-90 degrees (mayelana 60 degrees) entweni ngaphambili backrest. Inzuzo yaleli lungiselelo ukuba ehlombe efanele enyakazayo Knits elihambisana isakhiwo yokwakheka komzimba womuntu.
Square ijoka hook
Ungadlali ngothando ifomu elula ukuluka, uma unquma ukwenza lokhu ingxenye ngabanye izingcezu sikwele. Futhi, luluhle umkhiqizo ijazi (isibonelo esithombeni, okuyinto ahlelwe ngezansi).
umumo Square kungenziwa Kunconywa womshini imikhiqizo zezingane. Coquette hook amantombazane, njengoba umthetho, has a cut elula futhi ayidingi ukuhambisana ukunemba izibalo, ezifana sweaters kanye izingubo abadala. Isimo kuphela lena mkhiqizo ukuhambisana Ubukhulu eziyisisekelo kanye ntambo inhlanganisela ngendwangu.
Izingane ngothando hook kuhilela ukusetshenziswa inombolo okungenani lokuluhlaza futhi likuvumela ukudala i dress yokuqala, ngisho kusukela isikhafu ezinemibala (nombhali Isithombe wenza lokho).
Ikakhulukazi izithombe ijoka wukuthi usiko ephansi ngesikhathi ukuhlanganisa hhayi ama-staple. Armhole kwakhiwa web Basque phezulu kanye phansi Indwangu isikhafu. Indwangu akuyona ogcwele ngaphansi kwezandla ingane, kuye kusuka ngaphakathi ithungwe nokunwebeka band.
Coquette phansi ezihlobene
Ijezi ukukhilosha ijoka phansi akuyona ethandwa kakhulu, kodwa indlela ezuzisayo. Ababusebenzisayo, uma kungekhona ukuthi imininingwane ye-imodeli ikuvumela ukuba udlale ngothando ezinye izindlela ezichazwe.
Ukukhiqiza ijoka elinjalo kudingekile ukulungisa izinto phambi, emuva futhi izingalo, kuya armholes umugqa dovyazannyh. Ngemva ithungwe, ukuthi yizinto ezihlobene owayeseduze amakholomu isiyingi, ngaphandle sc futhi aqale obumbene ngothando nesibonelo ekhethiwe.
ukushintsha izidingo Usayizi kuwebhu ukunitha ezifana efanayo esigabeni ejokeni unxande kuyadingeka kuphela ukusika ngokulandelana iluphu.
Linked ngezansi ngothando hook nakho kungaba ukuma isiyingi, kodwa ukuze ulungise nomklamo walo kuzodinga nakho futhi umcabango knitters.
Ukuze umhlobiso umkhiqizo ijoka siphumelele futhi akazange abe ikhanda, kufanele wazi ezinye izici inqubo:
Obumbene imikhondo round shift kancane kancane imigqa mpo, kumele kubhekwe.
Kufanele uqaphele kakhulu ukunemba ukuqhathanisa zokuqala nezokugcina umbala chungechunge. ukunitha Isiyingi kunzima ukuzigcina kumugqa.
Coquette ogqoka hook, imodeli ohlinzekela fastener, kufanele acabangele ububanzi strip. Lokhu kusho ukuthi izingxenye ezimbili lapho ukuyona izokwenziwa (isibonelo, ngemuva) kufanele kube iyincane kunobubanzi izingxenye ngaphambili. Lapho kwakufanele wayibhinca ithungwe, ebubanzini nasekujuleni kwazo ilingana.
Ukuze abesifazane, ukugcwala ezimnandi kuhambisana kahle ihlobo igqoka onobuhle lace ijoka, esehlanganise emahlombe futhi ingxenye isandla.
Ububi kubalwa Usayizi izihibe futhi ngokuqinisekile ijoka ngokuvamile Ukwakheka kwezitho armholes imfushane kakhulu. Kufanele silitadisha ngokucophelela kuleli qophelo womshini imikhiqizo wathungela. Uma ukunitha coquette useqede, kodwa ububanzi akwanele ukuze uthole armholes egcwele, qhubeka ukunitha izingxenye kuphela ngaphambi futhi emuva.
Flirty Crochet ngokuvamile izibalo eziqondile nge amaphethini openwork. Openwork Indwangu kubukeka enza kahle, uma intambo esikhethiwe kuhle mncane futhi uvalwe curled (ukotini, nelineni, uvolo ingxube, polyamide). Ukukhethwa kungenzeka izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba mohair, Angora futhi cashmere. Lezi lokuluhlaza umncane kakhulu, kodwa kufanele torsion kancane. Ukusetshenziswa ntambo obukhulu kuhilela ngokuzenzakalela ukusetshenziswa amaphetheni okuqhubekayo ngokugcwele noma imiklamo kakhulu elula nge openwork kancane.
Izincomo okukulesi sihloko kungekho okungathatha isikhala sokuqongelela ulwazi lomuntu siqu, kodwa kungakusiza ukuba ugweme amaphutha ezivamile lapho ukunitha ukukhilosha abadlala ngothando ababona.
Nginyathela phezu kwesikhumba: izinhlobo ezahlukene
Pie kusuka inhlanzi okusemathinini kuhhavini: iresiphi ngesithombe
Ukufunda iresiphi elula I-amakhekhe
I peskotsementnaya ingxube: Ukwakheka, ukusetshenziswa, amanani
Uyaxebuka phakathi: iyini inqubo?
Ake sicabangele ngokuningiliziwe nendlela tie weba entanyeni yakhe